တရုတ်မှကားထုတ်လုပ်သူများအတွက်အသုံးပြုသောအပူချိန်မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်မြင့်သောပစ္စတင်နှင့်ပစ္စတင်လက်စွပ်များ | 1D;ONE
1D; Customed အပူချိန်မြင့်သောကူးစက်ခံထားရသောပစ္စတင်နှင့်ပစ္စတင်လက်စွပ်များကိုတရုတ်မှထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်
1D Auto Corporation သည်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်တောင်အာရှ Guang Zhou စီးတီးတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ပစ္စတင်, လက်စွပ်များနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအစုအဝေး, စသည်တို့
Toyota, Mitsubishi နှင့် ISUZU OEM ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်ပူးပေါင်းသည့်တရုတ်၏ထိပ်တန်းသုံးပင်းအိုးနှင့်0တ်စုံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
1. ခိုင်မာသောသုတေသန& နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - အင်ဂျင် 1600 ကျော်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခု, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, 200,000 PCS ပစ္စတင်လက်စွပ်။
2. စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ Bosch / Siemens စက်များ, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံတီ, ISO / TSL6949-2002, ISO-2014 အတည်ပြုသည်။
3. ကုန်တင်ထောက်ပံ့မှုအဆင်ပြေ& စျေးကွက်အချက်အလက်များနှင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်ရန်အတွက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့်တခြားကွမ်ကူးမြို့နယ်ရှိစက်ရုံဂိုဒေါင်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်အတွက်စက်ရုံသိုလှောင်ရုံအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်။
4. စျေးကွက် orientated& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,
တရုတ်နိုင်ငံတွင် 2012 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Gusngzhou;, ငါတို့ 1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ Crankshaft ၏လက်ကားရောင်းအားပေးသွင်းသူအဖြစ်ပါ0င်သောတစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်ခိုင်မြဲမှု (တစ် ဦး ချင်းစီ) အခြေခံကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏သီးသန့်ဒီဇိုင်းများ, သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ကြီးမားသောဖောက်သည်များအကြားကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဆောင်ရွက်နေသည်။ ဤအပြင်ဤ အချိန်မှစ. အချိန်ဇယားများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဖောက်သည်များ၏အမှာစာများကိုအချိန်မီတင်ပို့ခြင်းနှင့်အာမခံချက်ပေးရန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အာမခံချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည် ။